के नेपालमा केजरिवाल जन्मन सम्भव छ ? – Kathmandutoday.com
के नेपालमा केजरिवाल जन्मन सम्भव छ ?
काठमाण्डु टुडे २०७१ फागुन २ गते ३:४२ मा प्रकाशित
काठमाण्डु, २ फागुन– दिल्ली विधानसभामा आम आदमी पार्टी ‘आप’ ले दिग्विजय गरेपछि नेपालमा त्यसखाले पार्टीको सम्भावनाबारे बहस सुरु भएको छ ।
एक वर्षअघि अल्पमतको सरकार बनाएर ४९ दिनमै सत्ता छाडेका अरविन्द केजरीवाल नेतृत्वको आपले यसै साता विधानसभाका ७० मध्ये ६७ सिट जितेर दुनियाँलाई जिल्याएको हो ।
बहसको चौतारी बनेको छ, सञ्चार प्रविधिसँग निकट जमात रम्ने इन्टरनेट सामाजिक सञ्जाल (सोसल मिडिया) । एमआर खनालले टिवटे, ‘कुरो आम आदमी पार्टीको हैन, नेपाली जनताले पनि अहिलेका राजनीतिक दलहरूको प्रभावकारी विकल्प चाहेका छन् ।’
नेपालमा त्यस्तो वैकल्पिक शक्तिको सम्भावना नदेख्ने सञ्जीवले पनि टिवटे, ‘कुनै शक्तिका लागि नयाँ परिवेश चाहिन्छ । नेपालमा रेमिटेन्समा चुनौती आए वा तेलको भाउ आकासिँदाबाहेक त्यस्तो सम्भावना देख्दिन’ भन्दै ट्वीटे ।
तर आपजस्तो पार्टीको सम्भावना छैन भन्ने सुन्न नचाहनेहरू प्रशस्त छन् । केजरीवालको अपरिहार्यता नेपालमा छैन भन्नेहरू या मूर्ख हुन या धूर्त हुन जो कुनै न कुनै दलको मानो खाइरहेका छन् , शाह नाम राखेका एक जनाले ट्वीवटरमा लेखे । आर्थिक संकटग्रस्त युरोपेली मुलुकमा समेत नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाउन थालेको अवस्थामा छिमेकमा आएको राजनीतिक उलटफेरले यहाँ नयाँ शक्तिको बहस स्वाभाविक रूपमा चर्काउने विश्लेषक सञ्जीव पोखरेलले बताए ।
स्पेनमा बौद्धिक, अभिनेतालगायत ३० जनाले हस्ताक्षर गरेर गठन भएको ‘पोदेमोस’ले चार महिनापछिको चुनावमा ८ प्रतिशत भोटसहित ५४ सदस्यीय संसदमा ४ स्थान जितेको थियो । दुई वर्षअघि इटालीमा हास्य अभिनेता विपेग्रिलोको पार्टीले संसदीय चुनावमा २६ प्रतिशतसहित तेस्रो स्थान हासिल गरी परम्परागत ढाडी पार्टीहरूलाई गतिलो झापड दियो । केही साताअघिका ताजा घटना, संकटगस्त ग्रिसमा क्रान्तिकारी वामपन्थी गठबन्धन सिरिजाले बहुमत ल्याएर सरकार बनायो ।
दोस्रो संविधानसभाको सेरोफरोमा नेपालमा पनि नयाँ राजनीतिक शक्तिका लागि विभिन्न किसिमले वकालत भए । यसमा पत्रकार रवीन्द्र मिश्रदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईसमेत अग्रसर भए । तर पार्टीभित्रको राजनीतिक समीकरणमा केही अनुकूलता बनाएपछि भट्टराई चुप भए । उनले पछिल्ला दिनमा आपलाई बधाई मात्र भने, पुरानो दलिल उठाएनन् । उनलाई ‘उधारो अध्यक्ष’ मा रमाएको भनेर टिप्पणी गरियो ।
आपले जितेको भोलिपल्ट (बुधबार) विवेकशील नेपाली पार्टीका अध्यक्ष उज्ज्वल थापा र नेता गोविन्दनारायण तिम्सिना उत्साही अवस्थामा अफिसमा थिए । थापा भारतीय म्यागजिन ‘क्याराभान’मा छापिएको आपको उतारचढावबारे रिपोर्ट पढ्दै थिए ।
‘आपले जित्यो भन्दैमा वैकल्पिक शक्तिको उदय भइहाल्छ भन्ने त होइन’, तिम्सिना भन्दै थिए, ‘तर यसले नेपाली समाजमा नयाँ खालको राजनीतिक शक्तिबारे बहस त सुरु भयो ।’
उनका अनुसार आप सफल हुँदैमा यहाँ सफल हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त नभइहाल्नुपर्ने ३ कारण छन्, आपको नेतृत्वको पृष्ठभूमि, तिनले गरेको आन्दोलन तथा दिल्ली र काठमाण्डुको समाजबीचको फरक । समाजमा पहिचान बनाइसकेकाको नेतृत्व आपमा छ । अन्ना हजारे नेतृत्वको प्रभावशाली भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको जगमा आप बनेको थियो । प्रजातन्त्रको लामो अभ्यासबाट खारिएका दिल्लीवासी राज्यबाट आफूले पाउनुपर्ने संरक्षणबारे निकै सचेत र जागरुक छन् ।
‘उत्साही बनाउने कारण पनि छ, दुवैतिर समयको माग उही छ’, तिम्सिना भन्छन् । गत संविधान सभा चुनावमा आफूले थोरै भोट पाए पनि प्रत्येक चरणको गणना सकिएपछि प्रमुख पार्टीका उम्मेदवारका प्रतिनिधिले ताली बजाएर हौस्याएको उनी सम्भिmन्छन् । ‘हाम्रोजस्तो शक्ति उदाओस् भन्ने भित्री चाहना ठूला दलका कार्यकर्तामा छ’, उनी भन्छन्, ‘विवेकशीलजस्तो पार्टी बलियो भए आफ्ना नेता सुध्रिन बाध्य हुन्छन् भन्ने आस छ ।; विवेकशील विदेशमा पढेर फर्किएका नेपाली युवाको पहलमा जन्मिएको हो ।
उनीहरूले पहिलो संविधानसभा भंग भएपछि विवेकशील नागरिक भन्ने अभियान सुरु गरी राजनीतिक शुद्धीकरणको वकालत थालेका हुन् । त्यही समूह दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअघि राजनीतिक पार्टीका रूपमा दर्ता भएको हो । काठमाण्डुका ४ ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर पार्टीले ३ हजारभन्दा बढी भोट पायो ।